I-Sacagawea- iRustic kunye neGumbi le-Tranquil Lodge eManitou Lodge - I-Airbnb
I-Sacagawea- iRustic kunye neGumbi le-Tranquil Lodge eManitou Lodge
Igumbi le-Rustic Lodge kwisetingi esizolileyo
Elona gumbi likhulu le-Manitou Lodge lingeyo-suite – ibhedi yenkosi ejonge kwindawo entle yombane eyenza ubushushu. Ibhafu inebhafu / indibaniselwano yeshawari. I-Eclectic decor idibanisa iitafile ezenziwe ngesandla, isifuba se-oki esikhenkcezisi njengeofisi, i-salvage-moldings yemisedare, i-alder rods kunye ne-sleeper couch yomntu omncinci wesithathu (nceda usazise ukuba ufuna i-sleeper couch eyenziwe njengebhedi). Indawo enkulu yokuphumla emva kweveki exakekileyo, umtshato wayizolo, okanye usuku ngaphandle. Abantwana abangaphantsi kwe-10 abanakuhlaliswa kwaye izilwanyana zasekhaya azivumelekanga kweli gumbi. Iindwendwe ezi-3 ubuninzi, kunye nomrhumo owongezelelweyo womntu.
Yakhelwe okokuqala ngo-1970, indawo yethu yokulala yeeForks WA yakhiwe macala onke kwisakhiwo seloji yakudala enophawu olubalaseleyo lweGumbi elikhulu elinesilingi elinendawo yomlilo yamatye. Iibhedi ezininzi kunye nezitulo kweli gumbi zibonelela ngendawo yokuhlala nabanye, kwaye, kwangaxeshanye, ukuba ngasese. I-Lodge ikwalikhaya kwiVenkile yethu yeZipho ethandekayo ebonisa ubugcisa bomthonyama baseMelika kunye nePacific Northwest, ihobho, ubucwebe nokunye.
Sifumaneka kumgama nje wemizuzu engama-45 ukusuka eHoh Rainforest naseSol Duc Hot Springs, kwaye malunga neyure ukusuka eCape Flattery (eyona ndawo ikuMntla-ntshona kumaphondo angama-48 asezantsi) kunye neMyuziyam yeMakah kunye neNkcubeko eNeah Bay. Ulwandle lwaseRialto, olunomtsalane olugqwethekileyo kunye nelogu, luziikhilomitha nje ezi-3 kude. I-Quileute Tribe ihlala kwiikhilomitha ezili-9 ukusuka eLa Push, kunye ne-First Beach eLaPush kunye ne-Olympic National Park ye-Second and Third Beaches (ungabhidaniswa neeLwandle 1-3 emazantsi eKalaloch).
I-Rialto Beach, ukuphela kwe-drive-ukuya elunxwemeni kwindawo ekufutshane, yindawo ekhangayo, i-driftwood-strewn beach kwicala elingasentla lomlambo i-Quileute malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka eManitou Lodge. I-surf idla ngokuba nzima, i-driftwood ikhula ibe mikhulu, kwaye ukutshona kwelanga kuhle kakhulu. I-Rialto crescent ithatha malunga ne-1.5 yeemayile kwaye iphetha ngeemfumba ezimbini eziphakamileyo zolwandle, amachibi olwandle, kunye ne-"Hole-in-the-Wall", itonela eqingiweyo kwi-surf kwi-headland. Umgama oziikhilomitha ezili-18 ukunyukela emantla ukusuka eRialto Beach ukuya eCape Alava yeyona nto ithandwayo ngababhaka.
Okokuqala, iilwandle zeSibini kunye nezeSithathu zinwebeka emazantsi ukusuka emlonyeni woMlambo iQuileute. Ezi lwandle zinde, zithe tyaba ezithe tyaba ezithandwa ngabafoti ngenxa yobuninzi bolwandle (indawo eyaziwayo yolwandle, i-“Quileute Needles”, ihleli nje ngaselunxwemeni), amachibi olwandle, namaxhalanga. Ukufikelela kuLwandle lweSibini kunye nolweSithathu kufuna ukunyuka kwe-0.5 ukuya kwi-1.5 yeemayile, ngokulandelelanayo. Iindawo eziphambili kuLwandle oluQalayo kunye noLwandle lweSibini azinakugqithiswa, kodwa umntu unokupakisha ubhaka emazantsi ukusuka eThird Beach ecaleni konxweme malunga neekhilomitha ezili-17 ukuya kwisiXeko se-Oyile.
Izimvo eziyi-4 750